Kutsemuka of coccyx
Coccyx mapfupa nedzevakuru ndechokuti 4-5 vertebrae aumbwa, fused pamwe. Zvinonzi zvikuru kukunyimai famba, t. To. Iye waakaita pamwe sacrum nemarunda.
Nzvimbo yokupedzisira musana uyu angava akasiyana. Dzimwe nguva chinotungamirwa mberi, perpendicular kuti sacrum, uye kunyange akatuma mune zvimwe zviitiko. Zvose izvi zviri kuonekwa hwandaiva chisarudzo. Vakadzi vangaramba posterior ake pakusununguka, t. To. It anowedzera kukura yokuberekwa Canal.
It akapoteredzwa vakawanda tsinga fibers, asi akadzivirira kubva kukuvara muhombe gluteus tsandanyama.
Kukuvadza pfupa shoma izvi zvakaoma chaizvo, zvisinei, vanhu dzichitaridzika chiratidzo ichi ndicho kurwadziwa coccyx. Zvinogona chokuita kweiyi tsinga kana nemaziso atsamwira kuti mapfupa kuidya.
Kutsemuka of coccyx - isingawanzowanikwi kukuvara muvana izvozvo anenge hariwanikwi, dambudziko kazhinji vakaratidza dislocation.
The zvinokonzera kutsemuka
Kutsemuka of coccyx anogona kuuya chete somugumisiro zvakananga mupfungwa. Somuenzaniso, kuwa pamusoro magaro kana yose simba nokurohwa weveta muromo coccyx kana pashure kurova kungopotsera chinhu pamusoro coccyx. Mukadzi anogona kumukuvadza panguva kuberekwa zvakaoma, kana kuti mudumbu iri guru.
Kana atsamwira kuti nemarunda murume kwenguva refu anogona kunokanganisa chete kurwadziwa coccyx.
Kune makumbo kukuvara kunogona kuva kwakaoma chaizvo, t. To. The pakakuvara ari coccyx kunokanganisa kufamba. Hazvibviri kana kugara kana kumira hasha, sezvo zvakaoma defecation. Mune fungidziro zviri coccyx panguva iyoyowo ungacherechedza kuzvimba, kupwanywa kana akatsvuka.
gumo kuongorora chirwere
Zvinozivikanwa kuti pfupa mitswe vari zvakanaka chirwere ne muchipfuva radiograph Zvisinei, nokuti chirwere kukuvara ari coccyx, nzira iyi haisi sezvo mashoko, unogona kungoti haana kucherechedza kuvadza mufananidzo. Izvi zvinowanzoitika kana perelomovyvihe apo pane dislocation kana subluxation bvupa outgrowth coccyx.
Nokuti chirwere yakarurama coccygeal kukuvara zvinoda kunyatsoongorora murwere uye kudzidza kunotoda mufananidzo.
Coccyx kutsemuka kunokwanisa kuonekwa pashure mbiri chinhu kuongorora kuburikidza ari mugaranhoko (kana nyinyo). Zvinokwanisika kuona crepitus (anozivikanwa inzwi) pfupa nezvimedu, mufambo uye chiratidzo ane "danho".
Kana paine marwadzo ari coccyx pasina risati kukuvara, unofanira siya gynecological, Urological zvirwere kana nezvinetso mugaranhoko. Osteochondrosis lumbar marwadzo zvingaitikawo ari unyanzvi.
Kana akawanikwa pakakuvara ari coccyx wechokwadi, uye outpatient kurapwa iri kuchinja. Mumazuva 7 okutanga, unofanira kuita mubhedha zororo, t. To. Zvaive munguva iyi pane kurwadziwa simba. Kukwanisa basa zvingaparadzwa kwemwedzi.
Kana dislocation kana kutsemuka pamwe misha rutapudzo zvakakodzera kuita, izvo zvinoitwa maviri-mumaoko kubudikidza mugaranhoko. Zvadaro vanofanirawo kuita mubhedha zororo mazuva 10 uye zvokudya chaiwo kudzivirira kupatira. Nzvimbo murwere ari pamubhedha kunoenderana yezvakaita kukuvara vanofanira kuva vakadaro kuti marwadzo akanyangarika. Kuratidza achitora analgesics (semuenzaniso, diclofenac).
Kana chikamu pfupa asingadi kukura pamwe zvachose, hapana dislocation vpravlen (pamwe simba nounyoro), asiwo hapana zvazvinoita kuchinja kurapwa zvibereko rokubvisa coccyx. Munguva oparesheni, kungava tagovera sphincter, mugaranhoko, saka, kuti nzira iyi yokurapa kunofanira chokupedzisira.
Munokuridzirwa coccyx acho mishonga haina varumbidzwa, kuitira kudzivisa paumbwe zviratidzo zvakadai se "marwadzo coccygeal" kuti kunokanganisa rose upenyu. Inguva yokutsvaka rubatsiro kubva chiremba. Dambudziko munharaunda iyi inogona kubatsira chiremba kana kunotevera.
Vangakosora panguva pamukaka pane mushonga? Panzira dzinobudirira, nhungamiro
Kurutsa ari mwana
Virus chirwere ari mwana. How kumubatsira?
Feline distemper - kusvikira sezvazviri ngozi yenyu dzinovaraidza
Syndrome hukuru orbital kutsemuka uku: zviratidzo, nechirwere, kurapwa
Ndezvipi zviratidzo vaginitis
Sei Format munhu USB nokupenya nemotokari mureza uye kwete chaizvo nzira?
Openwork muenzaniso "Shell" tsono: Zano uye tsananguro
Curbs - zvinokosha kwatiri
Nderipi chiratidzo dementia uye sei vasingazvioni?
Vertical nokuberekwa - ndezvipi dzavo zvakanakira?
Lorry: Kureba rakasiyana-siyana tirera
Tea ine mukaka paanenge achiyamwa: kubatsirwa, kukuvadza, Quick uye wongororo
Baku (Azerbaijan) - zvinokwezva uye nhoroondo Zvivako kuti muri anofanira kushanyira mumwe. Tsvaka apo kuti zororo Baku
Meteor mvura - romoto miseve dzokudenga
Sezvo histogram muna Excel
Drug "Omnadren": inofambiswa migumisiro kushandisirwa
Ndezvipi zvinokonzera cellulite?